Mpandeha iray no nifamaly sy nikasi-tanana résevera. Nilaza ilay mpandeha fa tokony hamerenana 500 ariary izy. Nitsipaka izany kosa ilay résevera. Raikitra ny fifamaliana ary nampiakam-peo ilay mpandeha izay marihana fa mamo. Nidaroka avy hatrany an’ilay resevera ilay mamo ary sarotra nalamina. Navoaka ivelan'ny fiara ilay mpandeha, vokatr’izany. Tezitra mafy, noho izany ilay lehilahy mamo, ka novakiany ny fitaratr'ilay fiara fitaterana. Tezitra kosa ireo mpandeha ka nitarika azy indray niditra tao anatin'ilay fiara ary nitondra azy avy hatrany tany amin'ny zandary teny Anosizato. Mbola nampiaka-peo hatrany ilay lehilahy, nandritra izany, saingy niha nalefaka tsikelikely. Notazonin'ny zandary moa ilay lehilahy mamo nanaovana famotorana. Mbola nidrikina moa izy fa 1 000 ariary ny vola naloany, na dia efa nanamafy aza ilay mpandeha teo akaikiny fa 500 ariary ny vola nomeny, izay fototra nahatonga an’ity sakoroka ity.